मन्त्रीलाई खुशी पार्न नसकेपछि नम्रताको अवार्ड खोसियो ! - Himalayan Kangaroo
Posted by Himalayan Kangaroo | १५ श्रावण २०७२, शुक्रबार ०४:२५ |
काठमाडौं । राष्ट्रपति भवनमा आयोजना गरिएको ‘राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार’वितरण समारोहबाट नायिका नम्रता श्रेष्ठ एकाएक हराउँनुको रहस्य खुलेको छ । उनी हराउँनुको रहस्य पुरस्कार छनौट समितिका सदस्य समेत रहेकी अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरले खुलाएकी हुन् ।
करिश्माका अनुसार यसपटक उत्कृष्ट अभिनेत्रीको अवार्ड नम्रतालाई दिने लगभग निश्चित भैसकेको थियो । जुरी सदस्यहरु पनि यसमा एकमत देखिएका थिए । तर, सरकारी अवार्ड न परे । झन् त्यसमाथि ग्ल्यामरप्रेमी मन्त्री मिनेन्द्र रिजालको मन्त्रालयले वितरण गर्ने अवार्ड । त्यसैले अन्तिम समयमा आएर मन्त्रीजीले अर्की अभिनेत्री रिचा शर्माको नाम सिफारिस गरिदिनुभएपछि नम्रताको भागबाट घोषणा नहुँदै राष्ट्रिय अवार्ड खोसियो । त्यसरी आफ्नो भागको अवार्ड अरुले लिनेभएपछि आत्मिक रुपमा दबाब र तनावमा पर्नु स्वभाविकै हो । त्यही तनावले होला नम्रता कार्यक्रममा त उपस्थित भइन् तर ढिलो आइन् र छिटो गईन् । अरुले कुरा काट्ने मेलो नपाऊन् भन्ने मात्र उनको उदेश्य थियो ।
यो कुराको खुलासा स्वयम् जुरी सदस्य करिश्माले गरिदिएपछि कलिउड बजारमा केही गसिपहरुले मौलाउँने ठाउँ पाएको छ । आखिर मन्त्रीजीले नम्रताको अवार्ड किन खोसिदिए त ? र, रिचालाई नै दिनुको कारण के हुनसक्छ ? भनिन्छ यस्तै प्रश्नहरु नउठोस् भनेर अर्की बालकलाकार संगम बिष्टलाई पनि उत्कृष्ट अभिनेत्रीको अवार्ड दिइएको हो ।
हुनत, यस्ता खालका अवार्ड समारोहपछि विभिन्न खालका चर्चा चल्ने गरेका हुन्छन् । तर, जुरी नै असन्तुष्ट हुनुले पक्कै पनि ‘दालमा केही कालो छ’ भन्ने देखाउँछ । तर कालो चाहिं केमा थियो ? समयले नै बताउँला कि ?
Previousनेपालले आज स्कटल्याण्डको सामना गर्दै
Nextयो शक्रवार निलो चन्द्रमा उदाउँने !
“रातो सारी ” थ्रोंनबरी थिएटरमा
८ भाद्र २०७१, आईतवार ०९:०९